Plastic n'efu na-enye ohere imewe nke biodiesel | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Plastic n'efu na-enye ohere imewe nke biodiesel
Adrian | | biodiesel, Nzughari
El plastic Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị baa ụba na n'otu oge kachasị emetọ ebe ọ bụ na e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe, arịa na ihe eji arụ ha.
Ọtụtụ plastik ahụ na-ejedebe dị ka ihe mkpofu ma anaghị emegharị ya nke bụ nnukwu ndudue ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume iji plastik mepụta ọnụ ala mmanụ ụgbọala na karịa ihe niile dị ọcha. A na-eme atụmatụ na maka ihe mkpofu plastik ọ bụla, ihe dị ka lita 760 nke dizel na-emepụta.
A na-eji usoro akpọrọ pyrolysis nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị plastik niile nwere ike imegharị.
Usoro pyrolysis gụnyere ịkọwa plastik ahụ, na-etinye ha n'ime ihe dị n'ime obere iberibe ma na oven dị elu na-enye nitrogen ma na-ere ọkụ n'okpuru agụụ. Mgbe ahụ nke a mepụta gas nke na-abanye n'ụdị mmiri mmiri, na-ehicha ma na-ewepụ ihe mmetọ ọ nwere.
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ụdị ngwaahịa a ma na Europe ma na United States.
N'ime ha, Cynar pụtara ìhè, ọrụ na Ireland nke nwere ike ịmepụta plastik 665 lita lita XNUMX. dizel, 190 lita nke mmanụ ụgbọala na 95 maka manu oku.
Endinggbatị mmepụta nke ihe a na-arụ ọrụ ma rụọ ọrụ nke ọma ga-ebelata ịdabere na ya mmanụ, nke bu nnukwu nsogbu n’ebe otutu mba no.
Ruo ugbu a, ọ bụ naanị otu ụzọ nwere ụfọdụ ụdị iji gbanwee plastik ka ọ bụrụ mmanụ.
Nke nta nke nta, ha na-agba nzọ maka iji rọba mee mmanụ ọkụ, nke na-edozi nsogbu abụọ ọnụ, n'otu aka, nke mkpofu plastik na, na nke ọzọ, ụkọ mmanụ na mmanụ ọkụ.
N'afọ ndị na-abịanụ, ụdị ụlọ ọrụ a ga-etolite karịa gburugburu ụwa.
Plastic bụ nnukwu mmetọ na-emebi gburugburu ebe obibi, yabụ ị kwesịrị ịnwale iji ya belata ma jiri naanị ya ihe okike.
AHURTA: Megharịa m
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » biodiesel » Plastic n'efu na-enye ohere imewe nke biodiesel
Otu esi eji mmanu plastik eme ahihia
Ebee ka m ga - enweta igwe nwere ike nke 250 kgr / hr, nke na - emepụta mmanụ dizel, mmanụ ụgbọala na manu oku?
Zaghachi Jimmy Antezana G.
Megharịa diapers ma mepụta biogas
Iko nri a na - eri eri na ire ere